TTSweet: အမေ့သမီး ဂျူဂျူလေး
Posted by T T Sweet at 10:16 PM
ko9May 17, 2012 at 11:29 PM
juneone May 17, 2012 at 11:51 PM
ကလေးတွေက ဆူမှာ ကြောက်လို့ လိမ်တာတို့၊ ညာတာတို့ လုပ်တာကြားဖူးတယ်။အသိ အိန္ဒိယ လင်းမယား ရဲ့ သမီး ၆နှစ်ပေါ့။မအေလုပ်သူက စိတ်တိုတတ်တော့ ခဏ ခဏ ဆူတော့ အခုဆို ကျောင်းကကိစ္စတွေ ဆိုအမှန်မပြောတော့ဘူး လိမ်လိမ်ပြောလို့ အမေလုပ်သူက လိုက်ပြီးစုံစမ်းရတယ်။
တဦးတည်းသောသမီးတို.ရဲ. အမေတွေ အတူတူချည်းဘဲထင်တယ်။
မမိုး May 18, 2012 at 12:33 AM
ကျမ်းမာရင် ပြီးတာပါပဲ တီဆွိရယ်..
ဒို့တုန်းကလဲ အမေက ၀၀ကစ်ကစ်လေးမှ ချစ်စရာ
ဆိုပြီး တချိန်လုံး ၀ယ်ကျွေး ချက်ကျွေး အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာ၊
သူလဲ တီဆွိလို ဟုမ်းဆွိဟုမ်းပေါ့၊ ဒို့ကလဲ ဂျူဂျူးလေးလို တဦးတည်း
သော သမီးကိုး၊ နောက် ကြီးလာတော့ စားတတ်သောက်တတ်တာ
ဂျူဂျူးလေးက မပိန်ပါဘူးကွယ် ၊ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ်။
သူ့အမေကို ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာ ဒို့ငယ်ငယ်က အဖြစ်တွေ
တီဆွိတို့ မိသားစုအကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ရတာ စိတ်ကြည်နူးမိတယ်။
Shinlay May 18, 2012 at 1:38 AM
Anonymous May 18, 2012 at 5:38 AM
rose of sharon May 18, 2012 at 9:37 AM
လိမ္မာသိတတ်တဲ့ သမီးချောချောလေးရထားတာ တကယ့်ရတနာဘဲနော်း)
အမေ ရဲ့ အဝေးမှာ ရောက်နေရတော့ တီတီဆွိရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး လွမ်းမိတယ်
သူ များတွေကတောင် ချစ်တတ်လိုက်တာလို့ ပြောယူရတယ်
AMK May 18, 2012 at 12:10 PM
ဂျူးဂျူးလေးအကြောင်းဖတ်ရတာ သိပ်သဘောကျတယ်..တီဆွီတို့ နေကောင်းကျရဲ့ လား ခုအေးနေပြီဆိုတော့ ကွေးနေကြမှာဘယ် ဂျူးဂျူးလေးအကြောင်းတီဆွီရေးတာလေးတွေ Bookmarks လုပ်ထားတယ် သမီးလေးကြီးလာ၇င်ဖတ်ပြဖို့ ခုတော့၆ ပါတ်ပဲရှိသေးလို့ ငိုလိုက်ရီလိုက်နို့ စို့ လိုက်ပဲရှိသေးတယ် Happy belated Mothers day TTsweet
မြသွေးနီ May 18, 2012 at 12:50 PM
အလုပ်နည်းနည်းပါးချိန် စာတွေ ပြန်လိုက်ဖတ်တုန်း အမေချောနဲ့ သမီးချောအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတာ ကြည်နူးစရာ..။ မြသွေးလဲ သမီးလေးတစ်ယောက်လိုချင် စိတ်တောင်ပေါက်လာတယ်။ ဒီမှာက သားဆိုတော့ ဖအေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ဖြစ်နေတော့ တခါတခါ အကျိုးအကြောင်း ပြောချင်ဆိုချင်ရင်တောင် သူ့အဖေက ၀င်ဟန့်တာ လွန်နေလို့ မနက်ကပဲ နှစ်ယောက်သား သားကွယ်ရာမှာ ရှော့မီတင်လုပ်ခဲ့ရသေးတယ်။ မိဘဆိုတာ သားသမီးတွေအတွက် ပေးဆပ်ချင်နေသူများ ပါဘဲနော်။
မီမီ May 18, 2012 at 1:08 PM
မီးကတီဆွိရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ပါ... ဒီနေ့မှ ပိုစ့်အသစ်ဖတ်ရတာ... တီဆွိ blog ကိုနေ့တိုင်းလာလာချောင်းနေရတယ်... ဘယ်နေ့အသစ်တင်မလဲလို့... ဒီနေ့တော့ ဆန္ဒပြည့်သွားပြီ... အမြဲတမ်းလာအားပေးနော်မယ်နော်...
ပိုစ့်အသစ်တင်လို့ ၀မ်းသာသွားတယ်။ အထူးသဖြင့် သမီးလေးဂျူဂျူအကြောင်းဖတ်ရလို့ သဘောကျနေတာ။ ဂျူဂျူလေးက မပိန်ပါဘူးဗျ။
သက်ဝေ May 18, 2012 at 7:16 PM
သမီးရဲ့ လက်ရေးလေးတွေက လှလိုက်တာ...း)
သတိရနေတယ်... အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အဆင်ပြေပြေ နေကောင်းကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...
thida May 18, 2012 at 11:17 PM
Ma ma sweet, I happy to read your post.Actually I always visit your blog and I like any post.Ju Ju is very beautiful and not thin. I have naughty two sons.Actually I want clever daughter like Ju Ju.That ia my first my comment but I like your any post.After i read about Ju JU I will tell my sons she is very clever and she love her mother.
khin May 19, 2012 at 2:55 PM
Hello Sweet Sweet,
First of all pls say Hi to JuJu & she is so pretty now..I love all of ur posts..& I just realized that aww!!...I always ask for new post...new post...but blogger may have happy or unhappy time, but I never think about that. Anyway..Thanks for sharing....and this is the very good post for me which is telling me how to deal within mom & daughter.
T T Sweet May 19, 2012 at 10:01 PM
It is ok, no problem at all. We, blogger also please our self when we know that we have FANs who waiting for our new post. Always thanks for encouragement and cheerful comments. I am very sorry for my fans who wait very long for my new post even though my new post is not that good, just for my daughter only and ... so personal. Some times I pray I can write very nice post for my fans, but I am not that capable blogger. Some are still visit and leave comments even though I cannot reply single comments. I would like to apologize for all of them.
Thank you very much for encouragement. I got more power for next new post. Yes, boys and girls are totally different. Boys stay calm and never express their love to the parents, this is quite normal. They also not so close to the parents.
I remember, we both prayed at the Shwedagon Pagoda to getadaughter (while the other people pray forason) since we desperately wantadaughter at that time. She is very precious for us.
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနည်းငယ် slow down ဖြစ်သွားသည်မှလွဲ၍ အားလုံး ကျန်းမာနေကောင်းကြပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေလဲ မလည်ဖြစ်တော့ သူငယ်ချင်းဆီလည်း မရောက်တာကြာပါပြီ။ စလုံးမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အမြဲသတိရနေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ မိသားစုလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
T T Sweet May 19, 2012 at 10:13 PM
ခုလိုအမြဲလာလည်ပြီး ကွန့်မန့်လေးတွေချသွားတာ။ တီတီဆွိအတွက် ကာကွယ်ပြောပေးတာ အမြဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ... ဂျူဂျူလေးလဲ ခုတစ်လော အစားအသောက်ကောင်းနေလို့ ပါးလေးကို ဖောင်းနေတာပဲ။
မီမီ ပို့အသစ်တင်ရကျိုးနပ်အောင် ကွန်မန့်လေး ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးနော်။
မြသွေးရေ ...နောက်တစ်ယောက် သမီးလေးပေါ့။ သားပြည့်က အရမ်းလိမ္မာတာကို။ တို့လဲ သားပြည့်လို သားလိမ္မာလေး တစ်ယောက်လိုချင်နေတာ။ အသက်ကြီးသွားလို့ ...း) ပို့စ်သစ်တင်တာနဲ့ လာလာပြီး ကွန့်မန့်လေးတွေ ရေးရေးသွားတာကျေးဇူးနော်။ မြသွေးဆီတောင် မရောက်တာကြာပြီ။
ဟုတ်တယ် ... ခုဒီမှာ အရမ်းအေးနေပြီ။ ခု ည ၁၀နာရီ၊ အပူချိန် က ၉.၆ ပဲ ရှိတယ်။ နွေရာသီကုန်တော့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အချိန်လေးတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီပေါ့ကွယ်။ အနွေးထည်ထူထူ အရောင်မှိုင်းမှိုင်းတွေနဲ စိတ်တွေလဲ ထိုင်းမှိုင်းလို့။ အရင်နှစ်ကထက်တော့ နေသားကျလာပါပြီ။
သမီးလေးမွေးထားတာ ၆ပတ်ဆိုတော့ သိတောင်မသိလိုက်ဘူး။ ဘလော့ဂ်တွေလဲ မရောက်ဖြစ်တော့လို့ အဆက်အသွယ်တွေ ပြတ်နေတယ်။ လာလည်ဦးမယ်။
T T Sweet May 19, 2012 at 10:27 PM
သမီးတွေကလဲ အမေတွေကို ဝေးနေရတော့ သတိရတာပေါ့။ ဖုန်းမှန်မှန်ဆက်ပေါ့ ဇွန်ရေ။
နော်ဖော့ရေ နော်ဖော့မှာလဲ ချစ်စရာ သားချော သမီးချောလေး ၂ယောက်ရှိတာ တို့က အားကျနေတာ။
မရှင်လေး Lora ကျေးဇူုးပါ။ ဂျူဂျူလေးကို အန်တီရှင်လေးက နှုတ်ဆက်တဲ့ အကြောင်း ပြောလိုက်ပါ့မယ်ရှင့်။
မမိုးရေ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဆိုတော့ မိဘတွေက တုန်နေအောင်ချစ်မှာပဲ။ သေချာတယ်။ ခင်ဝတုတ်ဆိုတော့ ရယ်ချင်သွားတယ်။ ခုချိန်ထိတော့တို့လဲ ဂျူဂျူးကို ၀၀တုတ်တုတ်လေး ဖြစ်စေချင်တာ။ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ မမိုး။
အနောနိမတ်စ် ကျေးဇူးနော်။ နောက်ကျရင် နာမည်လေး သိပါရစေလား။ ဘာရယ်မဟုတ် နာမည်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ပိတ်သတ်တွေကို မှတ်မိလွယ်တာပေါ့နော်။ လမ်းတွေ့ရင်လဲ ခေါ်ရတာပေါ့း))
ဂျွန်ဝမ်းရေ အဲလို ခလေး လိမ်ညာမှာ။ ဆူမှာကြောက်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေမှာ အကြောက်ဆုးံပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကို မထိမ်းနိူင်ပဲ ပြောမိရင်တောင် နောက်ကျ ပြန်ချော့ပြီး နားလည်အောင်ပြောသင့်တယ်။
ဟဲဟဲ။ တို့ကတော့ သမီးမှ သမီးပဲ။ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာတောင် သမီးဆုပန်ခဲ့တာ။ ကျေးဇူးနော် လာလည်တာ။
ကော်ပေတံ မှတ်မိပါတယ်.. 1 ကျပ်လား မသိဘူးနော်.. ဈေးလည်းကြီးသလို၊ ၀ယ်လို့ လည်း မရဘူး.. ဟုတ်တယ်နော်အမ အဲ့ဒီ့တုန်းကဆိုရင် တစ်ခုခုပျောက်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရမ်းကို ကျိတ်ပြီး ၀မ်းနည်း စိတ်ဆင်းရဲရပြီး ကြောက်လည်းကြောက်နေရတာ...
အိမ်မက်စေရာ May 20, 2012 at 12:26 AM
ရေးတဲ့လူမပြောနဲ့ ဖတ်တဲ့လူတောင် စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ..
ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို အားကျမိပါတယ်..
ဂျူဂျူ လက်ရေးလေး လှလိုက်တာ..အစ်မ
ကိုယ့်သမီးလေးကိုယ် သိပ်ချစ်ရတော့ သူများအမေတွေ ချစ်တာ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးရတယ်..
Kyaw Hnin Se Lwin May 20, 2012 at 10:05 AM
ဂျုဂျုလေးက ကြီးလေချောလာလေ လိမ္မာလေပဲနော်
ချစ်ကြည်အေး May 21, 2012 at 3:08 PM
ဂျူဂျူးလေး ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ဆွိရယ်။ ဒီမှာ ကျောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေက အဲလိုပဲနော်။ သိတ် ခရီယေးတစ်ဗ်ဖြစ်တယ်။ ကဒ်လေးတွေ၊ ပန်းအိုးလေးတွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်တတ်ကြတယ်။ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ.....သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတာ....း)
ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာလေး။ သားသမီးလေးတွေ လိမ်မာတယ်ကြားရင် သိပ်စိတ်ချမ်းသာတယ်း)
Myitchay thu May 21, 2012 at 9:36 PM
I love reading all your posts about JU JU LAY.
susu May 22, 2012 at 9:57 PM
ဂျူဂျူလေး ရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကိုဖတ်ရတာ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်..အမေလုပ်ပေးတာတွေကို ဂျူဂျူလေးက တန်ဖိုးထားတတ်တယ်..ကိုယ်တွေတောင် အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းက ဒီလိုတွေစဉ်းစားခဲ့မိရဲ့လားမသိဘူး..လိမ္မာတဲ့ ဂျူဂျူလေးနဲ့ သမီလေးကို လိမ္မာအောင်အနီးကပ်သင်ပေးစောင့်ရှောက်တဲ့ တီဆွိကို လေးစားအားကျမိပါတယ်..
San San Htun May 25, 2012 at 12:25 PM
ဂျူဂျူလို သိတတ်လိမ္မာတဲ့ သမီးလေး ရထားတာ တီဆွိအတွက် ကံကောင်းသလို ဂျူဂျူလည်း တီဆွိလို အမေရထားတာ ကံကောင်းပါတယ်..ပို့ စ်လေးက တကယ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်...
ဇွန်မိုးစက် May 30, 2012 at 5:56 PM
ဂျူဂျူလေးက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အစ်မ။ ဖဘမှာ ပုံအသစ်တက်လာတာတွေ့ရင် အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်။း)
မြန်မာစာကို ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ပါသလား တီတီဆွိ..
amay yae... looking forward new post...နေကောင်း ရဲ့လား အမ ရေ။ မတွေ့ တာတော်တော် ကြာပြီ။
အားရင် စာ အသစ်တင်ပါအုံး
T T Sweet June 7, 2012 at 10:26 AM
မညို သမီး မြန်မာစာ မရေးတတ်မဖတ်တတ်ပါဘူး။ စင်္ကာပူမှာမွေးသူဆိုတော့ စာသင်ချိန်ရောက်တော့ တရုတ်စာတွေရော၊ အင်္ဂလိပ်စာတွေပါ language အမျိုးမျိုး မသင်မနေရ သင်ရတော့ မြန်မာစာပါထပ်ထည့်လိုက်ရင် ခလေး stress အရမ်းများသွားမှာစိုးလို့ မသင်ပေးတာပါ။ တချို့လဲ တိုပါးယိုးကျောင်းမှာ သင်သူတွေ ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။ မြန်မာစာက အမြဲဖတ်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ သင်ပြီးလဲ ပြန်မေ့သွားကြတယ်တဲ့။ မြန်မာပြည်က ၃-၄တန်း ထိ သင်ပြီးသူတွေတောင် စာမဖတ်ဖြစ်တော့ အတန်းကြီးရောက်ရင် အကုန်မေ့ကုန်တာဆိုတော့ သင်ပေးလဲ မထူးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်လည်းပါပါတယ်။
ဆုဆုရေ ရေးပါမယ် ။ ခဏလေးစောင့်နော်။
သူ့ အမေရဲ့ စာပေ အရေးအသားတွေကို သိစေချင်တယ့်သဘောပါ
မြန်မာစာကိုသိမှ ဘုရားစာတွေ ဘုန်းဘုန်းတွေရေးတယ့် စာတွေကို ဖတ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
ဂျူဂျူ့ ကို မြန်မာစာ ရေးတတ် ဖတ်တတ်စေချင်မိတယ်
Unknown June 15, 2012 at 7:18 PM
chocothazin June 21, 2012 at 7:51 PM
chocothazin June 21, 2012 at 7:52 PM
အစ်မရေ ဒီဘလော့လေးကို ရောက်တာ မကြာသေးပါဘူး။ ဟိုတလောက ဟင်းချက်နည်းတမျိုးရှာကြံရင်းနဲ့ ရောက်လာတာပါ။ နောက်တော့ ဘလော့ကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ဖတ်ကြည့်တာ အစ်မရဲ့ အရေးအသားလေးတွေရယ်၊ အကြောင်းအရာလေးတွေရယ်ကြောင့် မဖတ်ပဲမနေနိုင်လို့ ဘလော့ကို အစအဆုံး ဖတ်ပလိုက်တယ်း)
အစ်မဆွိတို့ တစ်မိသားစုလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
သြော် ဒါနဲ့ .. facebook မှာ အစ်မသက်ဝေအကောင့်ကတဆင့်ရှာပြီး invite လုပ်ထားတယ်နော်။